ထွန်းထွန်း – ဧရာဝတီ https://burma.irrawaddy.com Covering Burma and Southeast Asia Mon, 26 Oct 2020 12:19:45 +0000 en-US hourly	1	https://wordpress.org/?v=5.3.4 နှင်းဆီပါတီ ဦးကျော်မြင့်အား ထောင်ပြေးမှုဖြင့် အပြီးသတ်အမိန့်ချတော့မည် https://burma.irrawaddy.com/news/2020/10/26/232322.html Mon, 26 Oct 2020 12:19:45 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=232322
ဦးကျော်မြင့်(ခ) မိုက်ကယ်ဟွားဟူအား ယနေ့ ရုံးထုတ်ရာတွင် ပုဒ်မ-၂၂၄ အမှုအတွက် တရားခံပြသက်သေ တဦးကိုသာ စစ်ဆေးခဲ့ပြီး ကျန် ၅ ဦးအား ဦးကျော်မြင့် တို့ဘက်က ပြန်လည် ပယ်ဖျက်ခဲ့သည့် အတွက် အမှုမှာ ပိုမိုမြန် ဆန်လာခြင်း ဖြစ်သည်။
The post နှင်းဆီပါတီ ဦးကျော်မြင့်အား ထောင်ပြေးမှုဖြင့် အပြီးသတ်အမိန့်ချတော့မည် appeared first on ဧရာဝတီ.
]]> နှင်းဆီပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ အား ပုဒ်မထပ်တိုးအရေးယူ၊ ငွေကြေးခဝါချမှုဖြင့်ပါ ဆက်တရားစွဲဖွယ်ရှိ https://burma.irrawaddy.com/election-2020/2020/10/23/232212.html Fri, 23 Oct 2020 12:00:39 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=232212
နှင်းဆီပါတီ(ခ) ညီညွတ်သော ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ(UDP) ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်မြင့်အား ထောင်ပြေးမှု ပုဒ်မ-၂၂၄ အပြင် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေဖြင့်ပါ ထပ်တိုးတရားစွဲအရေးယူထားကြောင်း
The post နှင်းဆီပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ အား ပုဒ်မထပ်တိုးအရေးယူ၊ ငွေကြေးခဝါချမှုဖြင့်ပါ ဆက်တရားစွဲဖွယ်ရှိ appeared first on ဧရာဝတီ.
]]> မဲစာအိတ်ပွင့်နေသည့် တပ်ကြိုတင်မဲ ထည့်မရေရန် မြို့နယ် ရွေး/ကော်ဆုံးဖြတ် https://burma.irrawaddy.com/news/2020/10/23/232195.html Fri, 23 Oct 2020 09:22:30 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=232195
ဆန္ဒမဲလက်မှတ်ပါတဲ့ အိတ်တိုင်းက ပိတ် မထားဘူး။ ဒါက လုံခြုံစွာပိတ်ရမယ့်ကိစ္စ၊ နည်းဥပဒေမှာ ပါပြီးသား။ ဒါမှားယွင်းနေတယ်။ လုပ်ဆောင်မှု တော်တော်ကြီးကို လွန်လွန်ကဲကဲ မှားယွင်းနေတယ်ပေါ့နော်။ ကျနော်တို့အနေနဲ့ ဒါကို လက်မခံနိုင်တော့ဘူး၊ ကန့်ကွက်တယ်ပေါ့။
The post မဲစာအိတ်ပွင့်နေသည့် တပ်ကြိုတင်မဲ ထည့်မရေရန် မြို့နယ် ရွေး/ကော်ဆုံးဖြတ် appeared first on ဧရာဝတီ.
]]> နှင်းဆီပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်မြင့်ကို စိစစ်မှု အားနည်းခဲ့ကြောင်း UEC ဝန်ခံ https://burma.irrawaddy.com/news/2020/10/20/232042.html Tue, 20 Oct 2020 12:19:31 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=232042
ဦးကျော်မြင့်အနေဖြင့် ပါတီဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ် တင်ပြလာစဉ် သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနအား စိစစ်ခိုင်းခဲ့သော်လည်း နိုင်ငံခြား ရောက်နေသည့် အကြောင်းပြချက်ဖြင့် မစစ်ဆေးနိုင်ခဲ့ဘဲ ၎င်းတို့ဖြည့်သွင်းပေးသည့် မှတ်ပုံတင်နံပါတ်ဖြင့်သာ ခွင့်ပြုခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်သည်။
The post နှင်းဆီပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်မြင့်ကို စိစစ်မှု အားနည်းခဲ့ကြောင်း UEC ဝန်ခံ appeared first on ဧရာဝတီ.
ဦးကျော်မြင့်(ခ) မိုက်ကယ်ဟွားဟူ အနေဖြင့် နှင်းဆီပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ် လျှောက်ထားချိန်တွင် စိစစ်မှု အားနည်းခဲ့ကြောင်း ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်(UEC) အဖွဲ့ဝင် ဦးမြင့်နိုင်က ယနေ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ဝန်ခံပြောကြား လိုက်သည်။
ဦးမြင့်နိုင်က “အဲဒီအချိန်ကတော့ စိစစ်မှုကောင်းကောင်း မပြုလုပ်နိုင်ပါဘူး။ ကျနော်တို့ ဒီဘက်ကလည်းပဲ ချို့ယွင်းချက်ရှိ တယ်လို့ပဲ ပြောရမှာပေါ့နော်။ လုပ်ဆောင်စရာ ရှိတာလေးတွေ အားနည်ခဲ့တယ် ပြောရမှာပေါ့။ သက်ဆိုင်ရာက စိစစ်မှုက လည်းပဲ လိုအပ်ခဲ့တယ်လို့ ပြောရမှာပေါ့” ဟု ပြောသည်။
နှင်းဆီပါတီ(ခ) ညီညွတ်သော ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ(UDP) အား ကနေဒါနိုင်ငံတွင်၂၀၀၇ ခုနှစ်က စတင်တည်ထောင်ပြီး နောက်၂၀၁၀ တွင် မြန်မာနိုင်ငံ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ထံသို့ ဦးလှမြင့် ဆိုသူအား ဥက္ကဋ္ဌ တင်မြှောက်ကာ မှတ်ပုံတင် လျှောက်ထားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ယင်းသို့ လျှောက်ထားရာတွင် အမှတ်စဉ် ၁၆ ဖြင့် ပါတီ မှတ်ပုံတင်ရရှိခဲ့ပြီးနောက်၂၀၁၄ ခုနှစ်ခန့်မှသာ ဦးကျော်မြင့် ကိုယ် တိုင် ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ပါဝင်လာခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုစဉ်က ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ် ဒု ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း ဦးတင်အေးက တာဝန်ယူထားသည်။
ဦးကျော်မြင့် အနေဖြင့် ပါတီဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တင်ပြလာစဉ် သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနအား စိစစ်ခိုင်းခဲ့သော်လည်း နိုင်ငံခြား ရောက်နေသည့် အကြောင်းပြချက်ဖြင့် မစစ်ဆေးနိုင်ခဲ့ဘဲ ၎င်းတို့ ဖြည့်သွင်းပေးသည့် မှတ်ပုံတင်နံပါတ်ဖြင့်သာ ခွင့်ပြုခဲ့ ကြခြင်း ဖြစ်သည်။
“အမှန်တော့ ဒီဘက်ကလည်း ဆက်ပြီးလုပ်ဖို့ ကောင်းတာပေါ့။ ဒီအချိန် ရောက်ပြီလား၊ ဒီအချိန်‌ ရောက်ပြီလား ဆိုပြီး မေး လိုက်ရင်တော့ ကောင်းတယ်။ အဲဒီလို မမေးဖြစ်လိုက်ဘူး။ နောက်ပြီးတော့ မှတ်ပုံတင်နံပါတ် ပြောပါဆိုတဲ့ အခါကျတော့၊ ကျနော်တို့က မှတ်ပုံတင် မိတ္တူတွေ၊ ဘာတွေ တင်ပြဆိုရင် ပိုကောင်းတာပေါ့။ နောင်ဆိုရင် မှတ်ပုံတင်နံပါတ် ပြောရုံနဲ့ မရ ဘူး၊ မှတ်ပုံတင် မိတ္တူတွေကို ကြည့်မယ်” ဟု ဦးမြင့်နိုင်က ပြောသည်။
ပါတီဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ် တင်ပြစဉ်က ဦးကျော်မြင့်၏ မှတ်ပုံတင်အဖြစ် ဖြည့်သွင်းခဲ့သည့် မှတ်ပုံတင် နံပါတ်သည်လည်း ၎င်း၏ မှတ်ပုံတင် မဟုတ်ဘဲ ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်မှ အမျိုးသားတဦး၏ မှတ်ပုံတင် ဖြစ်ကြောင်း သမ္မတရုံး ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးဇော် ဌေးက ထုတ်ဖော် ပြောထားသည်။
ယင်းပြင် ဦးကျော်မြင့် အမည်ဖြင့် ကိုင်ဆောင်ထားသည့် မှတ်ပုံတင်မှာလည်း စစ်အစိုးရ လက်ထက်က ထောက်လှမ်းရေး အဖွဲ့၏ ထောက်ခံချက်ဖြင့် ထုတ်ပေးထားခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။
ထောင်ပြေးတဦး ဖြစ်သည့် ဦးကျော်မြင့်သည် မြန်မာနိုင်ငံသို့ တရုတ်နိုင်ငံမှ တဆင့်၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် စတင်ဝင် ရောက် လာချိန်မှ စ၍ အစိုးရ ရုံးစိုက်ရာ နေပြည်တော်တွင် ပါတီရုံးစိုက်ကာ ဖွင့်လှစ်ခဲ့သကဲ့သို့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများကိုလည်း လုပ်ကိုင်နိုင်ခဲ့သည်။
ယင်းသို့ ဆောင်ရွက်ချက်များတွင် ၎င်းနှင့်ဆက်နွယ်ခဲ့မှုအား အစိုးရက သီးသန့်အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းကာ စိစစ်လျက်ရှိသော်လည်း ၎င်းပြန်လည် ဝင်ရောက် နေထိုင်နိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့မှုများ၊ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ခဲ့မှုများ နှင့် ပတ်သက်ပြီး တစုံတရာ သီးခြား အရေးယူမှု မတွေ့ရသေးပေ။
လက်ရှိတွင် ဦးကျော်မြင့် ပိုင်ဆိုင်သည့် ငွေကြေးများမှာ တရုတ်နိုင်ငံ ရွှေလီနှင့် ကြယ်ဂေါင်မြို့ရှိ တရားမဝင်ငွေလွှဲ (ဟွန်ဒီ) လုပ်ငန်းများမှ တရားမဝင် ရောက်ရှိလာသည့် ငွေများ ဖြစ်ကြောင်းလည်း စုံစမ်းရေးအဖွဲ့က ဖော်ထုတ်ထားသည်။
ဦးကျော်မြင့် အနေဖြင့် တရားမဝင် ငွေများ လက်ခံရယူခဲ့ခြင်းနှင့် ယင်းငွေများဖြင့် ပါတီအား ထောက်ပံ့သုံးစွဲခဲ့သည့် အတွက် နှင်းဆီပါတီအား ဖျက်သိမ်းကာ ပါတီကိုယ်စားပြု လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအား ရွေးကောက် တင်မြှောက်ခံပိုင်ခွင့် မရှိတော့ကြောင်း UEC က အောက်တိုဘာ ၁၇ ရက်တွင် ကြေညာခဲ့သည်။
ပါတီပိုင် ပစ္စည်းများနှင့် ပတ်သက်၍လည်း သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေအရ အရေးယူဆောင်ရွက်ရန် UEC က အစိုးရသို့ တင်ပြ ထားပြီး နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဥပဒေပုဒ်မ-၁၉ အရ ဖျက်သိမ်းပြီးသည့် ပါတီပိုင်ပစ္စည်းများအား အစိုးရ စီမံခန့်ခွဲ မှုအောက်သို့ အပ်နှံရမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။
နှင်းဆီပါတီသည့်၂၀၁၀ နှင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲတို့တွင် တနေရာမျှ အနိုင်ရခြင်း မရှိခဲ့သော်လည်း ယခု၂၀၂၀ ရွေး ကောက်ပွဲတွင် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ၁၁၂၉ ဦး ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ရန် ပြင်ဆင်ထားပြီး အာဏာရပါတီ NLD ပြီးနောက် ဒုတိယမြောက် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း အများဆုံး ပါတီဖြစ်သည်။
ယင်းအတွက် လာမည့် ရွေးကောက်ပွဲတွင် နှင်းဆီပါတီ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအား မဲပေးရန် မလိုအပ်တော့ကြောင်း နှင့် မဲပေးမည် ဆိုပါကလည်း ပယ်မဲအဖြစ် သတ်မှတ်မည ်ဖြစ်ကြောင်း UEC က ယနေ့ ပြောကြားခဲ့သည်။
လက်ရှိတွင် ဦးကျော်မြင့်အား စက်တင်ဘာ ၂၉ ရက် ညပိုင်းတွင် ရန်ကုန်မြို့ ပန်းလှိုင်အိမ်ရာရှိ နေအိမ်မှ ဖမ်းဆီးခဲ့ကာ ထောင်ပြေးမှု ပုဒ်မ-၂၂၄ ဖြင့် မန္တလေးမြို့ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ် တရားရုံးတွင် တရားစွဲဆိုထားပြီး ယနေ့ အောက်တိုဘာ ၂၀ ရက်တွင် ရုံးထုတ် စစ်ဆေးခဲ့သည်။
ဦးကျော်မြင့်သည် မြန်မာကျုံယွမ် ကုမ္ပဏီအား တည်ထောင် လုပ်ကိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီး ယင်းကုမ္ပဏီအား ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင် အစိုးရက အမည်ပျက် စာရင်းသွင်းခဲ့ပြီးနောက် ၁၉၉၈ ခုနှစ်တွင် ၎င်းအား ပုဒ်မ-၅(ည)၊ ပုဒ်မ-၁၈၉ တို့ဖြင့် ထောင်ဒဏ် ၉ နှစ် ချမှတ်ခဲ့သည်။
ယင်းနောက် ၁၉၉၉ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် မန္တလေးထောင်မှ အပြင်ဆေးရုံကြီးသို့ ဆေးကုသရန် သွားရောက်ပြသစဉ် ထွက်ပြေး လွတ်မြောက်သွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ယနေ့တွင် ချမ်းအေးသာဇံမြို့နယ် တရားရုံးတွင် ဦးကျော်မြင့် ထွက်ပြေးမှု ဖြစ်စဉ်ကြောင့် ထောင်ဒဏ် ၉ နှစ် အပြစ်ပေးခံရ သည့် ထောင်မှူးဟောင်း ဦးဣန္ဒြောဘာသ(ခ) ဦးအေးချမ်းတို့ အပါအဝင် ၅ ဦးကို စစ်ဆေးခဲ့ပြီး၊ ဦးကျော်မြင့်အား ပုဒ်မ-၂၂၄ ဖြင့် စွဲချက်တင်ခဲ့သည်။
အမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး နောက်ရုံးချိန်းအား အောက်တိုဘာ ၂၃ ရက်သို့ ပြန်လည် ချိန်းဆိုထားပြီး ဦးကျော်မြင့်အား စစ်ဆေးမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်
]]> နှင်းဆီပါတီပိုင်ပစ္စည်း၊ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအရေး UEC ဘယ်လို ဆုံးဖြတ်မလဲ https://burma.irrawaddy.com/news/2020/10/19/231967.html Mon, 19 Oct 2020 13:11:18 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=231967
လက်ရှိတွင် UDP ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ ပါဝင်နေသည့် မဲလက်မှတ်များမှာလည်း ပြည်တွင်းရှိ ကော်မ ရှင် အဖွဲ့ခွဲများသို့ ဖြန့်ဝေပြီးပြီ ဖြစ်သည့်အတွက် မဲလက်မှတ်များ အသစ်ရိုက်နှိပ်ရန် မဖြစ်နိုင်တော့ဘဲ မဲလက်မှတ်တွင် ပါ ဝင်သည့် UDP ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ နေရာအား အမှတ်အသားဖြင့် ပယ်ဖျက်မည် ဖြစ်
The post နှင်းဆီပါတီပိုင်ပစ္စည်း၊ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအရေး UEC ဘယ်လို ဆုံးဖြတ်မလဲ appeared first on ဧရာဝတီ.
နှင်းဆီပါတီ(ခ) ညီညွတ်သော ဒီမိုကရက်တစ် ပါတီ(UDP) အား ဖျက်သိမ်းကြောင်းနှင့် ပါတီကိုယ်စားပြု ကိုယ်စားလှယ် လောင်းများသည်လည်း ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံပိုင်ခွင့် ဆုံးရှုံးပြီဖြစ်ကြောင် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် (UEC)က အောက်တိုဘာ ၁၇ ရက်တွင် ကြေညာခဲ့သည်။
UDP အနေဖြင့် နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဥပဒေ ပုဒ်မ-၁၂(က)(၄)နှင့် နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း နည်းဥပ ဒေ ပုဒ်မ- ၁၅(ခ)(ဂ)(စ) တို့အရ ငြိစွန်းကြောင်း UEC က ဆိုထားသည်။
အဓိက အားဖြင့် နည်းဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၅(ခ) တွင် “တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးနှင့် အေးချမ်းသာယာရေးကို ထိခိုက်စေသည့် ပြု လုပ်မှု တရပ်ရပ်ကို ပြုလုပ်ခြင်း” ၊ ပုဒ်မ ၁၅(ဂ) တွင် “ ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေနှင့် တည်ဆဲဥပဒေများကို လေးစား လိုက်နာမှု မရှိခြင်း”၊ ပုဒ်မ ၁၅(စ) တွင် “နိုင်ငံခြား တိုင်းပြည်တခုခု၏ အစိုးရ(သို့) ဘာ သာရေး အဖွဲ့အစည်း(သို့) အခြားအဖွဲ့အစည်း တခုခု(သို့) ပုဂ္ဂိုလ် တဦးဦးထံမှ ငွေကြေး၊ ပစ္စည်း၊ အခြား အထောက်အပံ့တို့ ကို တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်၍ ဖြစ်စေ ရယူသုံးစွဲခြင်း(သို့) ယင်းတို့၏ ဩဇာခံယူခြင်းပြုသည့် အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိခြင်း” အချက်များ ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။
ယင်းဖော်ပြချက်အရ ပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်မြင့်သည် ထောင်ပြေးတဦးဖြစ်ခြင်း၊ ပိုင်ဆိုင်သည့် ငွေကြေးများမှာ တရုတ်နိုင်ငံ ဘက်မှ တရားမဝင် ငွေလွှဲလုပ်ငန်းများကတဆင့် တရားမဝင် ရောက်လာသည့် ငွေကြေးများဖြစ်ခြင်းနှင့် ပါတီအား ထောက် ပံ့နေသည့် မြန်မာကျော် ကုမ္ပဏီမှာလည်း တရားဝင်ခွင့်ပြု လိုင်စင်များဖြင့် လုပ်ကိုင်မှု မဟုတ်ခြင်းတို့အား နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံး၏ ဖော်ထုတ် တွေ့ရှိချက်များနှင့် ဆက်စပ်လျက် ရှိသည်။
ပါတီ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ အနေဖြင့် လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေ ပုဒ်မ-၁၀(ဇ) နှင့် ငြိစွန်းကြောင်း လည်း UEC က ဆိုထားပြီး ပုဒ်မ-၁၀(ဇ) တွင် “ နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည် တခုခု၏ အစိုးရ(သို့) ဘာသာရေးအဖွဲ့ အစည်း(သို့) အခြားအဖွဲ့အစည်း တခုခု(သို့) ပုဂ္ဂိုလ်တဦးဦးထံမှ ငွေကြေး၊ အိမ်၊ မြေ၊ အဆောက်အအုံ၊ ယာဉ်၊ ပစ္စည်း စသည်တို့ကို တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်သော နည်းဖြင့်ဖြစ်စေ အထောက်အပံ့ ရယူသုံးစွဲသူ (သို့) ယင်းသို့ အထောက်အပံ့ ရယူသုံးစွဲ သည့် အဖွဲ့အစည်းဝင် ဖြစ်သူ” ပြဋ္ဌာန်းချက်နှင့် ငြိစွန်းပါက ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံပိုင်ခွင့် မရှိစေရဟု ပြဋ္ဌာန်းထားခြင်း ဖြစ်သည်။
သို့သော် ယင်း ပုဒ်မ၏ ပြဋ္ဌာန်းချက်အရ အငြင်းပွားဖွယ် တခုရှိနေသည်မှာ ပါတီဥက္ကဌဖြစ်သူ ဦးကျော်မြင့်အား မဖမ်းဆီး ခင်က တည်းက ပါတီက နုတ်ထွက်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ကာ တသီးပုဂ္ဂလ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအနေဖြင့် ရပ်တည်ရန် ကြိုးပမ်းခဲ့ သည့် ကချင်ပြည်နယ် ဝိုင်းမော်မြို့နယ်မှ ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးဂဲနက်စ် ကိစ္စပင် ဖြစ်သည်။
ဦးဂဲနက်စ် အနေဖြင့် ပါတီက နုတ်ထွက်စဉ်ကပင် မြို့နယ် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ထံသို့ အသိပေးခဲ့ပြီး လက်ရှိတွင် ပါတီဝင် မဟုတ်တော့သည့်အတွက် လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေ ပုဒ်မ-၁၀(ဇ)နှင့် ငြိစွန်းမှု မရှိကြောင်းနှင့် တသီးပုဂ္ဂလ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ် ဆက်လက် ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ပြုရေး အောက်တိုဘာ ၁၈ ရက်က သက်ဆိုင်ရာ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အဖွဲ့များထံ စာပေးပို့ထားသည်။
ဦးဂဲနက်စ်က “ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတဦးရဲ့ အခွင့်အရေးကို ဒီလိုပုံစံနဲ့ လွယ်လွယ်ကူကူ ဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေရဲ့ နစ်နာမှုက ကြိုတင်မဲတွေလဲ အများကြီး ရထားပြီးပြီ။ ကျနော် နစ်နာဆုံးရှုံးတာတင် မဟုတ်ဘဲ ကျနော့်အပေါ်မှာ ယုံကြည်တဲ့ မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူလူထုရဲ့ နစ်နာဆုံးရှုံးမှုလို့လည်း ပြောလို့ရတယ်။ ပါတီဖျက်ဖျက် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဖျက်ဖျက် ကျနော် စိတ်မဝင်စားဘူး။ စိတ်ဝင်စားတာက ကျနော့ရဲ့ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း အခန်း ကဏ္ဍကို ပျက်ဖို့ရာ အတွက်ကို ဥပဒေကြောင်းအရ ကျနော့်ဘက်က လုံးဝ ခွင့်မပြုနိုင်ဘူး” ဟု ပြောသည်။
နောက်တချက် အနေဖြင့် UDP ပါတီ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ ပါဝင်သည့် မဲလက်မှတ်များဖြင့် ပြည်ပမှ ကြိုတင်မဲများ ပေးပြီးပြီ ဖြစ်သည့်အတွက် UDP ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ ရရှိခဲ့သည့် မဲများမှာ ပယ်မဲအဖြစ် သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ် ကြောင်း ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲ တာဝန်ရှိသူများက ဆိုသည်။
လက်ရှိတွင် UDP ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ ပါဝင်နေသည့် မဲလက်မှတ်များမှာလည်း ပြည်တွင်းရှိ ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲများသို့ ဖြန့်ဝေပြီးပြီ ဖြစ်သည့်အတွက် မဲလက်မှတ်များ အသစ်ရိုက်နှိပ်ရန် မဖြစ်နိုင်တော့ဘဲ မဲလက်မှတ်တွင် ပါဝင်သည့် UDP ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ နေရာအား အမှတ်အသားဖြင့် ပယ်ဖျက်မည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် ၄၊ ကန့်ဘလူခရိုင်မှ ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုး ရေးပါတီ (USDP) ကိုယ်စားပြု ယှဉ်ပြိုင်မည့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးအောင်မောင်း ကို နိုင်ငံဝန်ထမ်း ဖြစ်နေသေးသည့် အတွက် အတည်ပြု ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ်က ပယ်ဖျက်ခဲ့ရာတွင် မဲလက်မှတ်ပေါ်ရှိ ၎င်း၏နေရာအား ကြက်ခြေ ခတ်ခြစ်ကာ ပယ်ဖျက်ခဲ့သည်။
လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲ နည်းဥပဒေ ပုဒ်မ-၃၇ တွင် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း အမည်စာရင်း တင်သွင်းထား သူ ပယ်ချခံရခြင်း၊ ကွယ်လွန်ခြင်းနှင့် ရွေးကောက်ပွဲ ရွေ့ဆိုင်းခြင်းတို့ ရှိပါက ရွေးကောက်ပွဲ အာမခံငွေ ကျပ်သုံးသိန်းအား ပြန်လည် ထုတ်ပေးရမည်ဟု ပြဋ္ဌာန်းသည်။
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်ဦးက “အရင် အစဉ်အလာအရ မဲလက်မှတ်ပေါ်မှာ သူ့နာမည်ကို ကြက်ခြေခတ် လိုက်ရတာပေါ့။ မဲတွေက ပို့ပြီးကုန်ပြီ။ ပြန်ရိုက်ဖို့လည်း အချိန်မရတော့ဘူး။ ပြီးခဲ့တဲ့ ကန့်ဘလူ က တယောက်တုန်းကတော့ မဲလက်မှတ်ပေါ်မှာ သူ့ရဲ့နေရာကို ကြက်ခြေခတ်ဖို့ ညွှန်ကြားစာ လာတယ်။ အခုက ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ ညွှန်ကြားချက်တော့ မလာသေးပေမယ့် ဒီလိုပဲ လုပ်မယ် ထင်ပါတယ်။ UDP က တနိုင်ငံလုံး ပြိုင်တဲ့ပါတီ ဆို တော့ လုပ်ရမှာ တော်တော်တော့ များတယ်” ဟု ပြောသည်။
လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတဦးအား ပယ်ဖျက်ပြီးပါက ကျန်ရှိသည့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲ ဆက်လက် ကျင်းပရမည် ဖြစ်ပြီး အကယ်၍ ယှဉ်ပြိုင်သူ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း တဦးတည်း ကျန်ရှိပါက ၎င်းအား လွှတ် တော် ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ကြေညာရန် တိုင်း(သို့) ပြည်နယ် ကော်မရှင်သို့ အမြန်ဆုံးတင်ပြရမည် ဟု လွှတ်တော် ရွေး ကောက်ပွဲ ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ ပုဒ်မ -၃၆၊ နည်းဥပဒေခွဲ (ဂ)၊ (ဃ)၊ (င) တို့တွင် ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။
သို့သော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအတွက် ထောက်ပံ့ခဲ့သည့် ဦးကျော်မြင့်ပိုင် ငွေကြေးနှင့် မြန်မာကျော်ကုမ္ပဏီ ပိုင် ငွေကြေးများသည် တရားမဝင် နည်းလမ်းများမှ ရရှိသည့်ငွေများ ဖြစ်ကြောင်း သမ္မတရုံးက ပြောဆိုထားသည့် အတွက် ဥပဒေဆိုင်ရာ အမှုအခင်းများ ရှိလာနိုင်ပြီး ပြန်လည် ထုတ်ယူခွင့် ရ မရအား ရှင်းလင်းစွာ မသိရသေးပေ။
သမ္မတရုံး၏ ဖော်ထုတ်ချက်အရ ဦးကျော်မြင့်ပိုင် Myanmar Kyaw Investment Group ကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ UDP ပါတီ နှင့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအား ထောက်ပံ့ လှူဒါန်းသုံးစွဲငွေ ကျပ် ၁၃ ဒသမ ၈၉ ဘီလီယံကျော် ရှိခဲ့ပြီး ယင်းငွေထဲတွင် ကိုယ်စားလှယ်‌လောင်း ၇၁၆ ဦးအတွက် တဦးလျှင် သုံးသိန်းစီဖြင့် UEC ထံသို့ အာမခံကြေးအဖြစ် ထောက်ပံ့ပေးသွင်းမှုများ လည်း ပါဝင်ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းပြင် နိုင်ငံရေး ပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဥပဒေ ပုဒ်မ-၁၉ အရ ပါတီတခုသည် မိမိဆန္ဒအလျှောက် ဖျက်သိမ်းလျှင်ဖြစ် စေ၊ ဥပဒေအရ ဖျက်သိမ်းခံရလျှင်ဖြစ်စေ ပါတီပိုင် ပစ္စည်းများအား နိုင်ငံတော် အစိုးရက သတ်မှတ်ပေးသည့် ဌာန၊ အဖွဲ့ အစည်းသို့ သတ်မှတ်သည့် နည်းလမ်းအတိုင်း အပ်နှံရမည် ဖြစ်ပြီး ယင်းပစ္စည်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆိုင်ရာဌာန၊ အဖွဲ့ အစည်းသည် အစိုးရ၏ ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ရမည်ဟု ပြဋ္ဌာန်းထားသည့်အတွက် ပါတီပိုင်ဆိုင်မှုများ အစိုးရထံ အပ်နှံရမည် ဖြစ်သည်။
သမ္မတရုံး၏ ဖော်ထုတ်မှုအရ UDP ပါတီ၏ ရုံးနေရာများ၊ မော်တော်ယာဉ်များနှင့် အခြားပစ္စည်းများမှ ပါတီပိုင်စာရင်းတွင် ပါဝင်ခြင်း ရှိမရှိ မရှင်းလင်းသော်လည်း UDP Educational Foundation အမည်ဖြင့် ငွေစာရင်း၂ ခု၊ United Democratic Party’s Fund+ ဒေါ်ဌေးဌေးဝင်း+ ဒေါ်မျိုးဟေမာန် အမည်ဖြင့် ငွေစာရင်း၂ ခု ဖွင့်လှစ်ထားသည်ကို တွေ့ရှိထားကြောင်း သိရသည်။
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ-၄၀၂ နှင့် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥပဒေများ ပုဒ်မ-၁၁ တွင် “ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်း ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ”၊ “ရွေးကောက်ပွဲခုံ အဖွဲ့များ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်များ၊ အမိန့်များနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အယူခံမှုများနှင့် ပြင် ဆင်မှုများ”၊ “နိုင်ငံရေးပါတီဆိုင်ရာ ဥပဒေအရ ဆောင်ရွက်သော ကိစ္စရပ်များ”တွင် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်၏ ဆုံးဖြတ် ချက်နှင့် ဆောင်ရွက်ချက်များသည် အပြီးအပြတ် ဖြစ်စေရမည်ဟု ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။
ယင်းပြင် နိုင်ငံရေး ပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဥပဒေ ပုဒ်မ-၂၀ တွင် နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေအရ ပြဋ္ဌာန်းချက် များအား အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်းပြီး ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်၏ အဆုံးအဖြတ်သည် အပြီး အပြတ် ဖြစ်စေရမည် ဖြစ်ပြီး မည်သည့် တရားရုံးတွင်မျှ တရားစွဲဆိုပိုင်ခွင့် မရှိစေရကြောင်း ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။
သို့သော် နှင်းဆီပါတီ တာဝန်ရှိသူတဦးကမူ ကော်မရှင်၏ ဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့် ပတ်သက်ပြီး ကန့်ကွက်စာ ပေးပို့မည်ဖြစ် ကြောင်း ထုတ်ဖော် ပြောကြားထားသည်။
]]> ဥက္ကဋ္ဌ အရှုပ်တော်ပုံကြောင့် နှင်းဆီပါတီ ဖျက်သိမ်းခံရဖွယ်ရှိနေ https://burma.irrawaddy.com/news/2020/10/15/231696.html Thu, 15 Oct 2020 11:25:36 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=231696
ကနဦးစိစစ်ဖော်ထုတ်ချက်များအရ ဦးကျော်မြင့်၏ ပိုင်ဆိုင်မှုအနေဖြင့် ငွေကျပ် ၂၃ ဘီလီယံကျော်အား ဖော်ထုတ် တွေ့ရှိ ထားသော်လည်း လက်တွေ့တွင် ပိုမိုများပြားစွာရှိနိုင်ပြီး ၎င်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုများအား ဆက်လက် ဖော်ထုတ် သွားမည်
The post ဥက္ကဋ္ဌ အရှုပ်တော်ပုံကြောင့် နှင်းဆီပါတီ ဖျက်သိမ်းခံရဖွယ်ရှိနေ appeared first on ဧရာဝတီ.
]]> ဦးကျော်မြင့် ပိုင်ဆိုင်မှုများ တရုတ်မှ တရားမဝင် ငွေများဖြစ်နေ https://burma.irrawaddy.com/news/short-news/2020/10/15/231668.html Thu, 15 Oct 2020 07:19:54 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=231668
နှင်းဆီးပါတီ(ခ) ညီညွတ်သောဒီမိုကရက်တစ် ပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်မြင့်(ခ) မိုက်ကယ်ဟွားဟူ၏ ငွေကြေးပိုင်ဆိုင်မှု များမှာ တရုတ်နိုင်ငံဘက်မှ တရားမဝင်ငွေလွှဲများမှတဆင့် လွှဲပြောင်းခဲ့သည့် ငွေများဖြစ်နေကြောင်း သမ္မတရုံး ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးဇော်ဌေးက ယနေ့ရှင်းလင်းပွဲတွင်ပြောသည်။
The post ဦးကျော်မြင့် ပိုင်ဆိုင်မှုများ တရုတ်မှ တရားမဝင် ငွေများဖြစ်နေ appeared first on ဧရာဝတီ.
ဦးဇော်ဌေး က “ ဦးကျော်မြင့်ရဲ့ ငွေစာရင်းတွေကို တရုတ်နိုင်ငံမှ တရားမဝင်ငွေလွှဲ (ဟွန်ဒီ) လုပ်ငန်းတွေကနေ ငွေ ကြေးလွှဲပြောင်းလာတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ မူဆယ်နယ်စပ်ကနေ အဆင့်ဆင့် လွှဲပြောင်းပေးပို့ထားတာ ဖြစ်ပါ တယ်” ဟု ပြောသည်။
ဦးကျော်မြင့်နာမည်ဖြင့် ပြည်တွင်းဘဏ်များဖြစ်သည့် ဧရာဝတီဘဏ်၊ ကမ္ဘောဇဘဏ်၊ မြန်မာ့အရှေ့တိုင်း ဘဏ်တို့တွင် ဦးကျော်မြင့်အမည်ဖြင့် ငွေစာရင်း ၇ ခုရှိပြီး အခြားဘဏ်များတွင်လည်း ၎င်း၏ လုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်သည့် ငွေစာရင်း ၂၅ ခု၊ ၎င်း၏ ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းများနှင့် ဆက်စပ်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူအမည်များဖြင့် ငွေစာရင်းမှာ ၃၄ ခုရှိကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ငွေစာရင်းများသို့ တရုတ်နိုင်ငံဘက်မှ လွှဲပို့ခဲ့သည့် ငွေပမာဏ စုစုပေါင်းမှာ ၂၀၁၅ ခုနှစ်အတွင်းမှာပင် ကျပ် ၁၆.၃၂၅ ဘီလီယံခန့်ရှိပြီး ယင်းငွေများ၏လည်ပတ်လုပ်ကိုင်မှုများမှလည်း အတိုး၊ အမြတ်များ ရရှိခံစားနေရကြောင်း သိရသည်။
ယင်းအပြင် ၎င်းပိုင်ဆိုင်တဲ့ ကုမ္ပဏီအချို့မှာလည်း ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်သာရရှိထားပြီး ငွေထုတ်ချေးခြင်း၊ ပို့ကုန်/သွင်းကုန်လုပ်ငန်းကဲ့သို့သော ဆက်စပ်လုပ်ငန်းများအတွက် လုပ်ပိုင်ခွင့် လိုင်စင်များအား သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနများက ထုတ်ပေးထားခြင်းမရှိကြောင်းလည်း သိရသည်။
]]> လုပ်ကြံခံရနိုင်တဲ့ လမ်းပဲရှိတော့တယ် https://burma.irrawaddy.com/opinion/interview/2020/10/14/231615.html Wed, 14 Oct 2020 13:03:50 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=231615
ထောင်မှူးကြီးဟောင်း ၁ ဦးဖြစ်သလို လက်ရှိမှာလည်း ဥပဒေဆိုင်ရာ အကြံပေးအဖြစ် ဆောင်ရွက်နေတဲ့ ဦးခင်မောင်မြင့်ကို ဧရာဝတီသတင်းဌာနက အကြီးတန်း သတင်းထောက် ထွန်းထွန်းက တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ်။
The post လုပ်ကြံခံရနိုင်တဲ့ လမ်းပဲရှိတော့တယ် appeared first on ဧရာဝတီ.
]]> နှင်းဆီပါတီ ဦးကျော်မြင့်ထံမှ မှတ်ပုံတင်အမှားနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှု ကျပ် ၂၃.၀၅ ဘီလီယံတွေ့ရှိထား https://burma.irrawaddy.com/news/2020/10/10/231373.html Sat, 10 Oct 2020 08:03:57 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=231373
နှင်းဆီပါတီဥက္ကဌ ဦးကျော်မြင့်ထံမှ နံပတ်နှင့်အမည် မှားယွင်းနေသည့် မှတ်ပုံတင်နှင့် ပိုင်ဆိုင်မှု ကျပ် ၂၃.၀၅ ဘီလီယံရှိနေသည်ကို ကနဦးတွေ့ရှိထား
The post နှင်းဆီပါတီ ဦးကျော်မြင့်ထံမှ မှတ်ပုံတင်အမှားနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှု ကျပ် ၂၃.၀၅ ဘီလီယံတွေ့ရှိထား appeared first on ဧရာဝတီ.
နှင်းဆီပါတီ(ခ) ညီညွတ်သော ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ ဥက္ကဌ ဦးကျော်မြင့်(ခ) မိုက်ကယ်ဟွာဟူထံမှ နံပတ်နှင့် အမည် မှားယွင်းနေသည့် မှတ်ပုံတင်နှင့် ပိုင်ဆိုင်မှု ကျပ် ၂၃.၀၅ ဘီလီယံရှိနေသည်ကို ကနဦးတွေ့ရှိထားကြောင်း သမ္မတ ရုံး ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးဇော်ဌေးက ပြောသည်။
ဦးကျော်မြင့်နှင့်ပတ်သက်ပြီး မှတ်ပုံတင်ထုတ်ပေးထားမှု၊ ငွေကြေးပိုင်ဆိုင်လည်ပတ်မှုနှင့် လှုပ်ရှားမှုများအား သီးသန့်အဖွဲ့ဖွဲ့ကာ စုံစမ်းစစ်ဆေးနေခြင်းဖြစ်ပြီး ၎င်းအားဖမ်းဆီးသည့် ညပိုင်းတွင်ပင် ကျပ်သိန်းတသောင်းကျော် ချက်လက်မှတ်ဖြင့် ထုတ်ယူမှုအား အချိန်မီသိမ်းဆည်းနိုင်ခဲ့ကြောင်းလည်း သိရသည်။
ဦးဇော်ဌေးက “တွေ့ရှိတဲ့အထဲမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ အတော်များများ ပါနေတာတွေ့ရတယ်။ ပါတီအတွက် သုံး နေတဲ့ငွေကြေးတွေက အများကြီးဖြစ်နေတယ်၊ အဲ့တော့ ဒီဟာတွေရဲ့ ဝင်ငွေရလမ်းက ဘယ်ကရလဲ၊ သူ့ရဲ့တရား ဝင်ဖော်ပြထားတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ ဒီလိုတွေဝင်သလား၊ ဝင်တဲ့အခါမှာလည်း ဘယ်ကဝင်လာတဲ့ ငွေတွေလဲ၊ ငွေဖြူလား။ သူ့ရဲ့စီးပွားရေးဆောင်ရွက်ချက်အရ ရရှိလာတဲ့ငွေလား။ ဗဟိုဘဏ်ကနေ စိစစ်နေတယ်”ဟု ပြောသည်။
ဦးကျော်မြင့်သည် ယခင်အစိုးရလက်ထက် ပြစ်ဒဏ်လွတ်ငြိမ်းပေးသူနှင့် Black List မှ ပြုတ်ပယ်ပေးသူစာရင်းတွင် ပါဝင်ခဲ့သူမဟုတ်ဘဲ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် ကနေဒါနိုင်ငံမှ တရုတ်နိုင်ငံသို့ရောက်ရှိလာကာ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် မူဆယ်နယ်စပ်ဂိတ်မှ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ခွင့်လက်မှတ်(Border Pass)ဖြင့် ဝင်ရောက်လာခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
လက်ရှိတွင် ၎င်း၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအနေဖြင့်လည်း မြန်မာကျော် ငွေရေးကြေးရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက်၊ မြန်မာကျော် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအဖွဲ့ ကုမ္ပဏီလီမိတက်၊ မြန်မာကျော် အဆင့်မြင့်နည်းပညာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ၊ မြန်မာကျော် ထရိတ်ဒင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက်တို့ကို စိစစ်တွေ့ရှိထားသည်။
ယင်းသို့မဝင်ရောက်မီ ၎င်းအနေဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံမှ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဆောက်လုပ်ရေးနှင့် လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများ တင်သွင်းခဲ့သည့် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ကြောင်းလည်း သိရသည်။
နှင်းဆီပါတီဥက္ကဌ ဦးကျော်မြင့်နှင့် ပတ်သက်ပြီး သတင်းနှင့်ဆိုရှယ်မီဒီယာများတွင် ဖော်ပြလာသည့်အခါ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဘက်က အစိုးရထံသို့ စိစစ်ဖော်ထုတ်ပေးရန် စတင်တောင်းဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး လတ်တလော ကနဦးဖော်ထုတ်တွေ့ရှိချက်များကိုလည်း ကော်မရှင်ထံ ပြန်လည်အသိပေးထားကြောင်း ဦးဇော်ဌေးက ပြောသည်။
ဆက်လက်၍လည်း ၎င်းအား မှတ်ပုံတင်ထုတ်ပေးမှု၊ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ခွင့်ကဒ်ထုတ်ပေးမှု၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ငွေကြေးစီးဆင်းလှည်ပတ်မှုများ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်ဆိုသည့်အချက်များအား ဖော်ထုတ်လျှက်ရှိနေပြီး ၎င်းကိုလည်း စစ်မေးမှုများ ပြုလုပ်နေကြောင်းသိရသည်။
ဦးဇော်ဌေးက “ခုလောလောဆယ်မှာတော့ အားလုံးဖော်ထုတ်လို့ မပြီးသေးဘူး။ စိစစ်ဖော်ထုတ်ပြီးတဲ့အခါ ခိုင်မာတဲ့ သက်သေအထောက်အထားတွေနဲ့ ဥပဒေအတိုင်းပဲ ဆောင်ရွက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်”ဟု ပြောသည်။
လက်ရှိတွင် ဦးကျော်မြင့်အား ရန်ကုန်မြို့၊ ပန်းလှိုင်အိမ်ယာရှိ ၎င်း၏နေအိမ်တွင် ထောင်ပြေးမှု ပုဒ်မ ၂၂၄ ဖြင့် စက်တင်ဘာ ၂၉ ရက်နေ့ညပိုင်းက ဖမ်းဆီးပြီးနောက် မန္တလေးထောင်သို့ လွှဲပြောင်းခဲ့ပြီး ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ် တရားရုံးတွင် အောက်တိုဘာ ၈ ရက်နေ့က ဒုတိယအကြိမ် ရုံးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
အမှုတွင် တရားလိုပြသက်သေအနေဖြင့် ၎င်းထွက်ပြေးစဉ်က အကျဉ်းထောင်တာဝန်ရှိသူအချို့နှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ အပါအဝင် ၁၀ ဦး တင်သွင်းထားပြီး တရားလိုများ၏ နေရပ်လိပ်စာများအား အတည်ပြုနိုင်မှု မရှိသေးသည့်အတွက် ပြီးခဲ့သည့် ရုံးချိန်းတွင် ရုံးထုတ်စစ်ဆေးနိုင်ခြင်း မရှိခဲ့ဘဲ အောက်တိုဘာ ၂၀ ရက်အား ရုံးချိန်းပြန်လည် ချိန်းဆိုခဲ့ သည်။
၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင် ဦးကျော်မြင့် တည်ထောင်ခဲ့သည့် မြန်မာကျုံယွမ်းကုမ္ပဏီအား အစိုးရက အမည်ပျက်စာရင်းသွင်း ခဲ့ပြီးနောက် ၁၉၉၈ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် ၎င်းအား ပုဒ်မ ၅(ည)၊ ပုဒ်မ ၁၈၉ တို့ဖြင့် ထောင်ဒဏ် ၉ နှစ်ချမှတ်ခဲ့ပြီး တနှစ်ခန့်အကြာ ၁၉၉၉ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၁၉ ရက်နေ့တွင် မန္တလေးအကျဉ်းထောင်မှ ကျန်းမာရေးအကြောင်းပြချက် ဖြင့် အပြင်ဆေးရုံကြီးသို့ သွားရောက်ပြသစဉ် ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားခြင်းဖြစ်သည်။
ယင်းသို့ ကနေဒါနိုင်ငံတွင် ရှိနေစဉ် ၎င်းအနေဖြင့် ညီညွတ်သော ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ(UDP)အား ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် ကနေဒါနိုင်ငံ၌ စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ထံတွင် မှတ်ပုံတင်ခဲ့ရာ အမှတ်စဉ် ၁၆ ဖြင့် ပါတီမှတ်ပုံတင် ရရှိခဲ့သည်။
ထွက်ပြေးလွှတ်မြောက်ပြီးနောက် အမေရိကန်နိုင်ငံနှင့် ကနေဒါနိုင်ငံတို့တွင် နေထိုင်ခဲ့ပြီး ကုမ္ပဏီပိုင်းဆိုင်ရာ အမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ရာတွင် ကနေဒါတရားရုံးတခုက ၎င်းအား ဒဏ်ငွေပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့သည်။
နှင်းဆီပါတီသည် ၂၀၂၀ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ၁၁၄၃ ဦး ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည် ဖြစ်ပြီး အာဏာရပါတီ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်(NLD) ပါတီနောက် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဒုတိယအများ ဆုံး ဝင်ပြိုင်သည့် ပါတီတခုဖြစ်သည်။
ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၀ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲနှင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲတို့တွင် UDP ပါတီက ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ သော်လည်း အနိုင်ရရှိခြင်း မရှိခဲ့ပေ။
]]> မဲဆန္ဒနယ်ပြင်ပ ရောက်နေသူများ လက်ရှိနေရာတွင် ကြိုတင်မဲ ပေးနိုင် https://burma.irrawaddy.com/election-2020/2020/10/09/231338.html Fri, 09 Oct 2020 12:48:38 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=231338
ပုံစံ-၃(က)ဖြင့် လျှောက်ထားပါက မူလမဲစာရင်းရှိ မိမိအမည်အား ပယ်ဖျက်ကာ လက်ရှိ လျှောက်ထားသည့် မြို့နယ် မဲစာရင်းတွင် ထည့်သွင်းပေးမည် ဖြစ်ပြီး လက်ရှိနေထိုင်သည့် မဲဆန္ဒနယ်မှ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကိုသာ မဲပေးခွင့် ရရှိမည် ဖြစ်သည်။
The post မဲဆန္ဒနယ်ပြင်ပ ရောက်နေသူများ လက်ရှိနေရာတွင် ကြိုတင်မဲ ပေးနိုင် appeared first on ဧရာဝတီ.
မဲဆန္ဒနယ်ပြင်ပ ရောက်ရှိနေသူများ အနေဖြင့် နေရပ်ပြန်၍ မဲပေးရန် အခက်အခဲရှိပါက လက်ရှိ နေထိုင်သည့် မြို့နယ် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်တွင် ပုံစံ-၁၅ လျှောက်ထားကာ ကြိုတင်မဲ ပေးနိုင်ကြောင်း ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော် မရှင်(UEC) က အောက်တိုဘာ ၈ ရက် ညနေပိုင်းတွင် ကြေညာလိုက်သည်။
ပုံစံ-၁၅ ဖြင့် လျှောက်ထားသူသည် မိမိ၏ မူလ မဲစာရင်း တည်ရှိရာ မဲဆန္ဒနယ်မှ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအား မဲပေး နိုင်မည် ဖြစ်သည်။
ယင်း အစီအစဉ်အား Covid-19 ကပ်ရောဂါ ကာလအတွင်း အကန့်အသတ်များကြောင့် နေရပ်ပြန်ရန် အခက်တွေ့နေ သူ များ မဲပေးခွင့် မဆုံးရှုံးစေရန် အထူးကိစ္စရပ် အဖြစ် ဆောင်ရွက်ခြင်း ဖြစ်သော်လည်း လျှောက်ထားနိုင်သည့် ရက်အကန့် အသတ်နှင့် မည်သည့် ရက်တွင် မဲပေးရမည်ကို အသေးစိတ် ဖော်ပြထားခြင်း မရှိပေ။
မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်အိအိမာက “ရက်ကတော့ ကန့်သတ်ထားတာ မပါဘူး။ ပုံစံ-၁၅ လာလျှောက်ရင်တော့ အမြန်ဆုံး အကြောင်းကြားပေးမယ်။ မဲလက်မှတ်တွေ ပြန်ရောက်လာပြီဆိုရင်လည်း လျှောက်ထားသူကို အကြောင်းကြားပေးမယ်။ အဲဒီအခါကျရင် မဲပေးလို့ရပြီပေါ့” ဟု ပြောသည်။
လျှောက်လွှာတင်ရန် ရက်သတ်မှတ်ချက်နှင့် ပတ်သက်ပြီး သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲကတော့ အောက်တိုဘာ ၈ ရက်မှ ၂၁ ရက်အတွင်း ပုံစံ-၁၅ လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း ဧရာဝတီသို့ ပြောဆိုသည်။
ကြိုတင်မဲအဖြစ် ပုံစံ-၁၅ လျှောက်ထားသည့် လုပ်ငန်းစဉ် အသေးစိတ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် သတင်းပြန်ကြာရေး အဖွဲ့ထံ ဆက်သွယ် မေးမြန်းခဲ့သော်လည်း လက်ခံဖြေကြားခြင်း မရှိသည့်အတွက် ကော် မရှင်အောက်ရှိ ရွေးကောက်ပွဲ ဌာနထံသို့ ထပ်မံ ဆက်သွယ်ခဲ့ရာတွင် ဖြေဆိုခွင့် မပေးထား၍ ဖြေကြားနိုင်ခြင်း မရှိကြောင်း နှင့် သတင်း ပြန်ကြားရေး အဖွဲ့ကိုသာ မေးမြန်ရန် အကြောင်းပြန်ခဲ့သည်။
မဲဆန္ဒနယ်ပြင်ပတွင် ရက်ပေါင်း ၉၀ နှင့်အထက် ရောက်ရှိနေသူများ မဲပေးခွင့်နှင့် ပတ်သက်ပြီး မူလက ပုံစံ-၃(က) ဖြင့် လျှောက်ထားရန် UEC က သတ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး အောက်တိုဘာ ၁၀ ရက် နောက်ဆုံး လျှောက်ထားရမည် ဖြစ်သည်။
ပုံစံ-၃(က)ဖြင့် လျှောက်ထားပါက မူလမဲစာရင်းရှိ မိမိအမည်အား ပယ်ဖျက်ကာ လက်ရှိ လျှောက်ထားသည့် မြို့နယ် မဲစာ ရင်းတွင် ထည့်သွင်းပေးမည် ဖြစ်ပြီး လက်ရှိနေထိုင်သည့် မဲဆန္ဒနယ်မှ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကိုသာ မဲပေးခွင့် ရရှိမည် ဖြစ်သည်။
ယင်းအတွက် နေရပ်ပြန်ရန် အခက်အခဲရှိသူ အချို့အနေဖြင့် မဲပေးခွင့် မဆုံးရှုံးစေရေး အတွက် ပုံစံ-၃(က)ဖြင့် လျှောက် ထားခဲ့ပြီးသော်လည်း ယခုကဲ့သို့ ပုံစံ-၁၅ ဖြင့် မိမိ မူလ မဲဆန္ဒနယ်မှ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအား မဲပေးခွင့် အခွင့်အရေး ထပ်မံပေါ်ပေါက်လာသည့် အတွက် ပုံစံ-၃(က)ဖြင့် လျှောက်ထားခဲ့မှုအား ပယ်ဖျက်ကာ ပုံစံ-၁၅ ဖြင့် ပြန်လည် လျှောက် ထားလိုကြောင်း ပြောကြားမှုများလည်း ရှိလာကြသည်။
“ကျမတို့ မရမ်းကုန်းမှာတော့ ပုံစံ-၃(က)နဲ့ ရပ်ကျေး အဆင့်မှာ လျှောက်ပြီးပေမယ့် မြို့နယ်အဆင့်မှာ စာရင်း မသွင်းရသေး ဘူး။ မူလမဲစာရင်းက မပယ်ဖျက်ရသေးဘူး ဆိုရင် ပုံစံ-၁၅ ပြန်ပြောင်းပြီး လျှောက်လို့ရအောင် ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်၊ ဒါ က ကျမတို့မြို့နယ် တခုတည်း အတွက်ပဲ ပြောတာပါ” ဟု ဒေါ်အိအိမာက ပြောသည်။
လက်ရှိတွင်လည်း မရမ်းကုန်းမြို့နယ်တွင် ကြိုတင်မဲ ပေးရန် ပုံစံ-၁၅ ဖြင့် လျှောက်ထားရန် လျှောက်လွှာထုတ်ယူထားသူ မှာ ၂၀ ကျော်ရှိနေပြီး ၁၀ ကျော်မှာ ဖောင်များ ပြန်လည် တင်ပြထားပြီ ဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရသည်။
UEC အနေဖြင့် ပြည်တွင်း ကြိုတင်မဲများနှင့် ပတ်သက်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပသည့်နေ့တွင် ညနေ့ ၄ နာရီထက် နောက် မကျဘဲ သက်ဆိုင်ရာမဲရုံးသို့ ပြန်လည် ပေးပို့ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ညွှန်ကြားထားပြီး နောက်ကျပါက ပယ်မဲ အဖြစ် သတ်မှတ် ရမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
လက်ရှိတွင် Covid-19 ကပ်ရောဂါ ကူးစက်ပျံ့နှံ့မှုကြောင့် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး၊ ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့် မြို့နယ် ၁၁ မြို့ တို့တွင် Stay at Home အဖြစ် သတ်မှတ်ထားပြီး နယ်မြေ ကျော်သွားလာမှုများကိုလည်း ကန့်သတ်ထားသည်။
၂၀၂၀ ခုနှစ် အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲအား နိုဝင်ဘာ ၈ ရက်တွင် ကျင်းပမည် ဖြစ်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပရန် ရက်ပေါင်း ၃၀ သာ လိုတော့သည်။
]]> သက်သေ အရှာခက်နေ၍ နှင်းဆီပါတီ ဥက္ကဋ္ဌကို ရုံးမထုတ်ဖြစ် https://burma.irrawaddy.com/news/short-news/2020/10/08/231234.html Thu, 08 Oct 2020 06:24:21 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=231234
ရုံးချိန်းတွင် တရားရုံးနှင့် အကျဉ်းထောင် တာဝန်ရှိသူများက အွန်လိုင်း ဗီဒီယိုဖြင့် ဖုန်းခေါ်ဆိုကာ ချုပ်ရမန် အားပေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး နောက်တပတ် ရုံးချိန်းအား အောက်တိုဘာ၂၀ ရက်သို့ ပြန်လည် ချိန်းဆိုထား
The post သက်သေ အရှာခက်နေ၍ နှင်းဆီပါတီ ဥက္ကဋ္ဌကို ရုံးမထုတ်ဖြစ် appeared first on ဧရာဝတီ.
]]> လူစုလူဝေး မဖြစ်စေချင်လို့ လုပ်ပေမယ့် ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ် https://burma.irrawaddy.com/opinion/interview/2020/10/08/231220.html Thu, 08 Oct 2020 05:32:32 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=231220
သံရုံးကို ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသည့် ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲ အထောက်အကူပြုကော်မတီ-ကိုရီယားအဖွဲ့က ဦးဆောင်သူ ဦးဝင်းပေါ်မောင်နှင့် ဧရာဝတီသတင်းဌာနမှ အကြီးတန်း သတင်းထောက် ထွန်းထွန်းက ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားသည်။
The post လူစုလူဝေး မဖြစ်စေချင်လို့ လုပ်ပေမယ့် ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ် appeared first on ဧရာဝတီ.
၂၀၂၀ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအတွက် ပြည်ပနိုင်ငံအသီးသီးရှိ မြန်မာနိုင်ငံသားများ ကြိုတင်မဲများ ပေးလျှက်ရှိရာတွင် တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရှိ မြန်မာသံရုံးတွင်လည်း အောက်တိုဘာ ၂ ရက်မှ စတင်ကာ ၁၂ ရက်နေ့အထိ မဲရုံ ဖွင့်လှစ် ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသည်။
ယင်းသို့ဆောင်ရွက်ရာ ပထမဆုံး မဲပေးရသည့် အောက်တိုဘာ ၂ ရက်နေ့တွင် မဲဆန္ဒရှင် အများအပြား လာရောက်ခဲ့ရာ၌ သံရုံးဘက်က စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှု အားနည်းချက်များကြောင့် လူစုလူဝေးဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရပြီး မဲမပေးဘဲ ပြန်ခဲ့ကြရသူ များစွာ ရှိခဲ့သည်။
ကြိုတင်မဲအတွက် ကိုရီးယားနိုင်ငံရောက် မြန်မာနိုင်ငံသား ၉၈၁၀ ဦး မဲပေးခွင့် ရရှိထားရာတွင်လည်း အောက်တိုဘာ ၆ ရက်နေ့အထိ ၄၅၉၁ ဦး မဲပေးပြီးပြီဖြစ်ပြီး ကျန်ရှိသူ ငါးထောင်ကျော်မှာ ဆက်လက်မဲပေးလျှက်ရှိသည်။
ယနေ့ကဲ့သို့ အလုပ်ဖွင့်ရက် ကြားရက်များတွင် မဲလာပေးသူနည်းသော်လည်း လာမည့် သောကြာ၊စနေ၊ တနင်္ဂနွေ ပိတ်ရက်များတွင် မဲပေးသူများလာနိုင်သည့်အတွက် လူစုလူဝေး ထပ်မံမဖြစ်ပေါ်စေရေး မဲပေးမည့် နေ့ရက်အလိုက် ကြိုတင်ကာ နံပါတ်စဉ်ရယူရေးအတွက် သက်ဆိုင်သည့် ဖုန်းနံပါတ်များကိုလည်း သံရုံးဘက်က ထုတ်ပြန်ကြေညာ ထားသည်ကိုတွေ့ရသည်။
လတ်တလော မဲပေးနေသည့် အခြေအနေများ၊ ပိတ်ရက်တွင် လူစုလူဝေး ထပ်မဖြစ်ရေးနှင့် သံရုံး၏ ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ဆောင်ရွက်ခဲ့မှု အခြေအနေများအား သံရုံးကို ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသည့် ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲ အထောက်အကူပြုကော်မတီ-ကိုရီးယားအဖွဲ့က ဦးဆောင်သူ ဦးဝင်းပေါ်မောင်နှင့် ဧရာဝတီသတင်းဌာနမှ အကြီးတန်း သတင်းထောက် ထွန်းထွန်းက ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားသည်။
မေး ။ ။ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲ အထောက်အကူပြု ကော်မတီအနေနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ငန်းစဉ်အတွက် သံရုံး နဲ့ ဘယ်လို ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေ ရှိခဲ့ပါသလဲ။
ဖြေ ။ ။ မဲလုပ်ငန်းစဉ်တွေကို ဆုံးဖြတ်တာတော့ သံရုံးက ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ ညွှန်ကြားချက်တွေနဲ့ ဆောင်ရွက် တာပေါ့နော်။ ကျနော်တို့က ဒီမှာအခြေအနေတွေ ဘယ်လိုရှိတယ်၊ ဘယ်လိုစီစဉ်မယ်ဆိုတာတွေကို ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ အကြံ ပေးတယ်၊ ပါဝင်ပြီးတော့လည်း ကူညီတယ်။
ပုံစံ-၁၅ တွေ လက်ခံဆောင်ရွက်တဲ့ အပိုင်းတွေမှာဆိုရင် ကျနော်တို့တွေ သံရုံးရဲ့ ကိုယ်စားလိုမျိုး အများကြီးလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်တခါ ဒီမှာရှိတဲ့ မဲဆန္ဒရှင်တွေကို အသိပညာပေးတာပေါ့၊ ကြိုတင် မဲကိစ္စတွေကို သတင်းတွေ ဖြန့်ဝေပေးတဲ့ အပိုင်း တွေ၊ ကူညီပေးတဲ့အပိုင်းတွေ လုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။အခုလက်ရှိမှာကျတော့ မဲရုံဖွင့်ထားပြီဆိုတော့ မဲရုံမှာ မဲပေးတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ် တွေမှာ အတွင်း အပြင်ပေါ့လေ ကျနော်တို့အားလုံး ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်။
မေး ။ ။ ကိုရီးယားမှာ ကြိုတင်မဲ ပေးခွင့်ရှိသူ ဘယ်လောက်ရှိသလဲ၊ လက်ရှိမှာ ဘယ်နှစ်ဦး ပေးပြီးပြီးလဲ။
ဖြေ ။ ။ ကြိုတင်မဲလက်မှတ် ပြန်ရထားတာက ၉၈၁၀ ပြန်ရပါတယ်။ အဲဒီအထဲကနေ ဒီကနေ့(အောက်တိုဘာ ၂ ရက်နေ့ ၆ ရက်နေ့) အထိ မဲပေးလိုက်တဲ့အားလုံးဆိုရင် ၄၅၉၁ ဦး ပေးထားပါတယ်။
မေး ။ ။ မဲစပေးတဲ့ ပထမရက်တွေမှာ လူစုလူဝေးနဲ့ အဆင်မပြေတာတွေရှိခဲ့ကြတာ၊ ဘာကြောင့်ပါလဲ။ သံရုံး က ကြိုတင်စီစဉ်မှု အားနည်းခဲ့တယ်လို့ ထင်ပါသလား။
ဖြေ ။ ။ ကြိုတင်စီစဉ်ဆိုတာကတော့ သံရုံးနဲ့ ကျနော်တို့နဲ့ ပူးတွဲပြီးတော့ စီစဉ်ထားတာပေါ့နော်။ အဓိက ဘာ လဲဆိုတော့ ကျနော်တို့ ရည်ရွယ်တဲ့ပုံစံနဲ့ တကယ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပုံစံနဲ့ ကွဲလွဲသွားတာပေါ့။ ကျနော်တို့တွက်ဆချက် လွဲသွားတာ။ ကျနော်တို့က ကိုဗစ်-၁၉ ရဲ့ အခြေအနေကြောင့် လူစုလူဝေး မဖြစ်စေချင်တဲ့အတွက် အစုလိုက်ပေါ့နော်၊ ကျနော်တို့ဆီကို ကြိုတင်ပြီးတော့ ဆက်သွယ်ပါ။ အစုလိုက်ပဲလာကြပါ။
တကယ်လို့ လိုအပ်တယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့က နေရာထိုင်ခင်း ကျဉ်းတဲ့အခါကျတော့ ကားတွေနဲ့ အစုလိုက် အရွေ့အပြောင်း တွေ လုပ်မယ်ဆိုပြီး ပြင်ဆင်ထားတာ။ တဦးချင်းလာတဲ့ ပမာဏကိုတော့ သိပ်များများ မလာစေချင်လို့ပေါ့နော်။ အဲဒီလို မျှော်မှန်းပြီး အုပ်စုလိုက်ရွေ့လို့၊ ပြောင်းလို့ရအောင် စီစဉ်ထားတယ်။
ဒါပေမယ့် တကယ်လက်တွေ့ဖြစ်သွားတဲ့ အခြေအနေကျတော့ ကျနော်တို့ကို ကြိုတင် အကြောင်းမကြားဘဲနဲ့ ဆက်သွယ်မှု မလုပ်ဘဲနဲ့ မဲပေးချင်တဲ့ ဆန္ဒတက်ကြွစွာနဲ့ တဦးချင်းလာတဲ့ ပမာဏက ကျနော်တို့ မှန်းထားတဲ့ ပမာဏထက်ကို ၄ ဆ၊ ၅ ဆ လောက်များသွားတယ်။ အဲဒီအခါကျတော့ လူစုလူဝေး ဖြစ်သွားတာပေါ့။
၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲ အထောက်အကူပြုကော်မတီ-ကိုရီယားအဖွဲ့က ဦးဆောင်သူ ဦးဝင်းပေါ်မောင်
ကျနော်တို့က လူစုလူဝေး မဖြစ်စေချင်လို့ လုပ်ပေမယ့် ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်။ အဲဒီအခါကျတော့ ကျနော်တို့ ဆွဲထားတဲ့ အစီအစဉ်က လုပ်လို့ မရတော့ဘူး ပေါ့ နော်။ ကျနော်တို့ လုပ်ထားတဲ့ အစုတွေကိုက ခဏဖယ်ထုတ်ပြီး ခွဲထားလို့ရတယ်။ တဦးချင်း ရောက်လာတဲ့သူတွေကို ကျတော့ ခွဲထုတ်လို့မရတော့ဘူး။ မှန်းထားတဲ့ ပမာဏဆိုရင် ထိန်းလို့ရပေမယ့် များသွားတဲ့အခါကျတော့ ထိန်းရတဲ့ အချိန်က ပိုကြာသွားတယ်။
မေး။ ။ အဲဒီလိုဖြစ်သွားတဲ့အခါက ကြုံခဲ့ရတဲ့ အခက်အခဲက ဘာဖြစ်သွားခဲ့လဲ။
ဖြေ။ ။ အခက်အခဲကတော့ လူစုလူဝေးနဲ့ ဖြစ်သွားတာပါ။ အဲဒါကို ကျနော်တို့ တော်တော်လေး ခဲခဲယဉ်းယဉ်းနဲ့ လျော့ချရ တယ်။ လူစုမြန်မြန်ကွဲအောင် ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ လုပ်ရတယ်။ ဒါပေမယ့် မဲပေးတဲ့နေရာမှာ အဆင်မပြေမှုဖြစ်တယ် ဆိုတာ ကတော့ မဟုတ်ဘူးဗျ။ အဲဒါတော့ ကျနော်ငြင်းရဲတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ မဲရုံဝကို ရောက်သွားပြီးတော့ မဲပေးပြီး ပြန်ထွက်လာတဲ့အထိ လုပ်ငန်းစဉ်ကတော့ ချောတယ်။ အဲဒီနေရာမှာ ဘာအခက်အခဲမှမရှိဘူး။ အဲဒီနေ့(အောက်တိုဘာ ၂ )က မဲလက်မှတ်ပေါင်း ၁၆၂၈ စောင်ရတယ်။ အဲဒီပမာဏက မဲပေးတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်မှာ ဘာမှ အထစ်အငေါ့ မရှိဘူးဆိုတာကို သက်သေပြတယ်။ မဲပေးတဲ့နေရာမှာ အခက်အခဲတွေရှိတယ်ဆိုတာကတော့ သတင်းအမှားတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မေး ။ ။ လက်ရှိ ရုံးဖွင့်ရက်မှာ မဲလာပေးသူနည်းပေမယ့် နောက်လာမယ့် ပိတ်ရက်တွေမှာ များလာဦးမယ့် အနေ အထားကို အဆင်ပြေအောင် သံရုံးက ဘယ်လိုစီစဉ်ထားတာ တွေ့ရပါသလဲ။
ဖြေ ။ ။ ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ ဒီတပတ်ကတော့ အဲဒီလောက်ကြီး ဖြစ်စရာအကြောင်း မရှိတော့ဘူးဗျ။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ အရင်အပတ်က ဖြစ်ရတာကလည်း ရုံးပိတ်ရက်တင် မကဘူး။ ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ ရိုးရာပိတ်ရက် ဖြစ်တဲ့အခါ ကျတော့ အားလုံးပိတ်သွားပြီးတော့ တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ လူတွေအကုန်လုံးရဲ့ အားလပ်ရက်က စုံသွားတဲ့အခါကျတော့ အကုန်လုံးက ဒီနေရာမှာလာပြီးတော့ စုသွားတဲ့ ပုံစံဖြစ်သွားပါတယ်။
အခုတခါကျတော့ ရုံးပိတ်ရက်က ၃ ရက် ဆက်တိုက် ပါပဲ။ သောကြာ၊စနေ၊ တနင်္ဂနွေဖြစ်တယ်။ ရုံးပိတ်ရက်ဖြစ်သော် လည်းပဲ ကိုရီးယားမှာ လုပ်ငန်းခွင်တွေရဲ့ ပိတ်လေ့ပိတ်ထ ရှိတဲ့ သဘော သဘာဝအရ အားလုံးစုံပြီးတော့ ပိတ်မှာ မဟုတ်ဘူး။ တချို့လူတွေက အလုပ်ဖွင့်တာ ရှိနေဦးမယ်။ ကျန်တဲ့သူကလည်း ၄၅၀၀ ဦးလောက်ပဲ ကျန်တာဆိုတော့ တရက်အတွင်းမှာ အများကြီး စုပြုံလာစရာ အကြောင်း မရှိတော့ပါဘူး။ ရှိလာခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်း ကျနော်တို့ ထိန်းလို့ရပါတယ်။
အခုလည်း ကျနော်တို့ဆီမှာ ကြိုတင်ပြီးတော့ ဘယ်သူတွေ ဘယ်နေ့လာနိုင်မလဲဆိုတာကို စာရင်းတွေကောက်ပြီး တော့ တွက်ချက်ပြီးတော့ ထားပါတယ်။ အဲဒီအတွက်လည်းပဲ ကြိုတင်ပြီးတော့ ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။
မေး ။ ။ မဲဆန္ဒရှင်များတဲ့ ကိုရီးယားသံရုံးအနေနဲ့ အရင်ကတည်းက မဲရုံခွဲထားပေးဖို့ကို မစီစဉ်ခဲ့တာလား၊ စီစဉ် ခဲ့တာရှိခဲ့ရင် ဘယ်လိုကြောင့် မထားဖြစ်တာလို့ ထင်ပါသလဲ။ သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံနဲ့ ဆွေးနွေးမှု ဘယ်လိုအခြေအနေ ရှိခဲ့ တယ်ဆိုတာ သိထားပါသလား။
ဖြေ ။ ။ ဒီကိစ္စကတော့ ကျနော်တို့တတွေ ၂၀၁၅ မှာလည်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်။ ၂၀၂၀ မှာလည်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီသံရုံးတွေအားလုံးနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နဲ့ ဆွေးနွေးကြတဲ့အထဲမှာလည်း ဒီကိစ္စတွေ ပါဝင်တယ်ဆိုတာ ကျနော်တို့ သိပါတယ်။ သို့သော် မဲရုံခွဲလို့မရပါဘူး။ မရဘူးဆိုတာက လောလောဆယ်မှာရှိနေတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေ၊ ကိုရီးယားမှာ ရှိနေတဲ့ ဥပဒေ အခြေအနေတွေအရ မဲရုံခွဲလို့ ရနိုင်တဲ့ အနေအထားမှာ မရှိသေးပါဘူး။ ဒါကို အကောင်အထည် ဖော်မယ် ဆိုရင်တော့ နှစ်နိုင်ငံအစိုးရချင်း ညှိနှိုင်းပြီးတော့ လုပ်ဆောင်မှရမယ့် အနေအထားမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ သံရုံး၊ သံတမန် အဆင့်နဲ့တော့ မဲရုံခွဲတဲ့လုပ်ငန်းက မဖြစ်နိုင်သေးပါဘူး ခင်ဗျ။
မေး ။ ။ ကြိုတင်မဲပေးဖို့အတွက် ပုံစံ-၁၅ တင်ပြီး မဲပေးခွင့်မရသူ အရေအတွက် ဘယ်လောက်ရှိပါသလဲ။
ဖြေ ။ ။ ဒီမှာတော့ သိပ်မရှိဘူးခင်ဗျ။ ကျနော်တို့ တင်လိုက်တာ ၁၀၁၆၉ ဦး။ မဲလက်မှတ်ပြန်ရတာက ၉၈၁၀ ဆိုတော့ လူ ၄၀၀ မပြည့်တပြည့်လေးပဲ ကျန်တာပေါ့။ အဲဒီထဲက သံရုံးကို ပြန်ပြီးတော့ တင်ပြတဲ့လူပမာဏက အလွန်နည်းပါတယ်။ ကျနော်သိသလောက် ဆယ်ဂဏန်းလောက်ပဲရှိတယ်။ အဲဒါကိုလည်း သံရုံးကနေ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ကို ပို့မှာပေါ့ နော်။
အဲဒါကို ဒုတိယအကြိမ် ပြန်စစ်ဆေးလို့မှ မဲပေးခွင့်ရှိတယ်ဆိုရင် သူတို့မဲလက်မှတ်တွေ ပြန်ရမှာပေါ့။ အဲဒီလို ရှိပါ တယ်။ မဲလက်မှတ် ပြန်ပေးလာတယ်ဆိုရင် သံရုံးအနေနဲ့ လုပ်ပေးရပါလိမ့်မယ်။ မဲရုံးကြီး မဖွင့်ရင်တောင်မှ ဒီနေ့ ဒီရက်မှာ လာရောက်ပြီး မဲပေးနိုင်ပါတယ်ဆိုတာ လုပ်ပေးရပါမယ်။
မေး ။ ။ နောက်တချက်က တချို့နိုင်ငံတွေမှာ မဲလက်မှတ်တွေ တခြားနိုင်ငံကို မှားပြီး ပါသွားတာမျိုး ရှိပါတယ်။ ကိုရီးယားသံရုံးမှာရော ဒီလိုဖြစ်စဉ်ရှိပါသလား၊ ရှိတယ်ဆိုရင် ဦးရေဘယ်လောက်ရှိတယ်လို့ သိထားပါသလဲ။
ဖြေ ။ ။ ရှိပါတယ်။ မဲလက်မှတ်တွေက စက်တင်ဘာ ၂၉ ရက်နေ့ကပဲရောက်တယ်။ အဲဒီနေ့မှာပဲ မဲလက်မှတ်တွေနဲ့ မဲစာရင်းတွေ တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးရတာ ၃၀ ရက်နေ့မှာ အပြတ်လုပ်ရပါတယ်။ ဒီမဲလက်မှတ် ၉ ထောင်ကျော်ကို လုပ်တဲ့ အခါမှာ အခြားနိုင်ငံက မဲလက်မှတ်တွေ ကျနော်တို့ဆီ ပါလာတာတွေ့ပါတယ်။ မဲစာရင်းထုပ်တွေမှာလည်း တခြား မဲစာရင်း ထုပ်တွေ ကျနော်တို့ဆီပါလာတာ ရှိပါတယ်။
အဲ့ဒါတွေကတော့ အကုန်လုံး စာရင်းဇယားတွေနဲ့ ပြန်လည်လွှဲပြောင်း ပြီးတော့ ပြေလည်အောင် ဖြေရှင်းရပါတယ်။ အရေအတွက်ကတော့ အတိအကျ ပြောဖို့ ခက်ပါတယ်။ စစ်ဆေးမှုတွေပဲ ဦးစားပေးလုပ်ရတော့ အဲဒီအပိုင်းအထိ ကျနော်တို့ မသိတော့ပါဘူး။
မေး ။ ။ မဲပေးတဲ့နေရာမှာ မဲဆန္ဒရှင်တွေရဲ့ အခက်အခဲတွေ ဘာတွေရှိခဲ့လဲ။ ဥပမာ- မဲလက်မှတ်မှာ ကော်မရှင် တံဆိပ်မပါတာ၊ စွန်းရာ၊ ခြစ်ရာပါတာမျိုးတွေပေါ့။
ဖြေ ။ ။ အခုထိတော့ ကျနော်တို့ အဲဒီလိုမျိုး မကြားသေးဘူး။ သိရသလောက်တော့ မဲလက်မှတ်တွေမှာ တံဆိပ်တွေ၊ အကုန်လုံး ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ပါပါတယ်။ နောက်တခုက တိုင်းရင်းသားမဲလည်း မပါဘူးဆိုတာ မကြားသေးဘူး။ ကျနော်လည်း ဒါကို အမြဲတမ်း နားစွင့်နေပါတယ်။ အမြဲလည်းမေးပါတယ်။ ကျနော်တို့ဆီတော့ အဲဒီလိုပြဿနာ မတွေ့သေးပါဘူး။
မေး ။ ။ ရွေးကောက်ပွဲအထောက်အကူပြု ကော်မတီအနေနဲ့ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ယခုရွေးကောက်ပွဲ အကြား ဘာတွေ ကွာခြားသွားတယ်လို့ သုံးသပ်မိပါသလဲ။
ဖြေ ။ ။ ကွာခြားမှု ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ မဲဆန္ဒရှင်တွေဘက်က မဲပေးဖို့အတွက် တက်ကြွမှုကတော့ တော်တော်ကြီး ကို မြင့်တက်လာပါတယ်။ အရေအတွက်တွေတော့ မပြောတော့ဘူး။ တော်တော်ကို မြင့်တက်လာတယ်။ ပုံစံ-၁၅ တွေကို လည်း တင်တယ်။ တကယ်လည်း လာပြီးတော့ မဲပေးတယ်။ ဒါက အင်မတန်ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မကွာခြားတာက ဘာလဲဆိုတော့ ကော်မရှင်ရဲ့ လုပ်ပုံကိုင်ပုံတွေကတော့ မကွာခြားပါဘူး။
၂၀၁၅ မှာတုန်းက ကျနော်တို့ တွေ့ကြုံခဲ့တဲ့ဟာတွေကို Report လုပ်ပြီးတော့ ကျနော်တို့ ပို့ပါတယ်။ ဒီအချက်၊ ဒီ အချက် တွေဟာ ပြုပြင်သင့်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ ကျနော်တို့ပြောပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ ပုံစံ-၁၅ ဖြည့်ရတဲ့ စနစ်တွေကအစ ပြုပြင်ဖို့ ကောင်းပါတယ်ဆိုပြီး ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘာမှမထူးခြားပါဘူး။ မဲစာရင်းတွေဆိုရင်လည်း ၂၀၁၅ တုန်းက ရှုပ်ပွနေတဲ့ ပုံစံတွေက အခုလည်းပဲ ခပ်ရှုပ်ရှုပ်ပါပဲ။
၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲ အတွက် ကိုရီးယားတွင် ကြိုတင်မဲပေးကြသူများ/facebook
ကျနော်တို့မှာ တော်တော်ကြီးကို ခက်ခက်ခဲခဲနဲ့ အချိန်ကိုလုပြီး လုပ်ရပါတယ်။ အဲဒါတွေကတော့ ကော်မရှင်ဘက်က ဘာမှထူးခြားမှု သိပ်ပြီးမရှိလာဘူး လို့ ကျနော်တို့က ပြောချင်ပါတယ်။ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းမှာ ဘာမှ ထူးထူးခြားခြားမရှိဘူး။
အခုလို ကိုဗစ်-၁၉ ကာလနဲ့သွားကြုံတဲ့အခါကျတော့ လေယာဉ်တွေက နေ့တိုင်းမရှိဘူး။ အဲဒီတော့ ပုံမှန်အချိန်ဇယား ဆွဲထားတဲ့အထဲမှာပဲ ကိုဗစ်-၁၉ ကိုလည်း ကျော်ဖြတ်ရတဲ့အခါကျတော့ အချိန်အခက်အခဲလည်း အင်မတန် ကြုံပါတယ်။
နောက်ပြီးတော့ ဒီစာရင်းဇယားကိစ္စတွေမှာလည်း တိုးတက်လာသင့်တဲ့ Soft Copy တွေ၊ စနစ်တကျ ဖြစ်သင့်တဲ့ ဟာတွေ က မဖြစ်ဘဲနဲ့ အကုန်လုံးက ထိုနည်းလည်းကောင်းပဲ ပြန်လုပ်ရတယ်။ မဲစာရင်းတွေကို အင်တာနက် ကနေ၊ Facebook တွေကနေ တွေ့ပါလိမ့်မယ်။
အကုန်လုံးက ကိုယ့်ရဲ့အချက်အလက်တွေကို ဖွင့်ပြီးတော့ ကြေညာပေးနေရတယ်။ တကယ် ဆိုရင် ကျနော်တို့ ရည်ရွယ်ချက်က အဲဒီလိုလုပ်ဖို့မဟုတ်ဘူး။ မဲစာရင်းအမှတ်စဉ် လူနာမည်နဲ့ မှတ်ပုံတင်အမှတ်လောက် ကိုပဲ ချုံ့ပြီးတော့ ကြေညာချင်တာ။ ဖြစ်နိုင်ရင်။
မလိုအပ်တဲ့ဟာတွေကို လျော့နိုင်သမျှ လျော့ထားခဲ့မယ်၊ ဒီလိုရည်ရွယ်ထားတာ။ တကယ်တမ်းကျတော့ မလုပ်နိုင်ဘူး။ သူတို့လုပ်ထားတဲ့စနစ်တွေက မလုပ်နိုင်တဲ့အခါကျတော့ ရှိတာတွေအကုန်လုံးကို ဖွင့်ချပေးလိုက်ရတယ်။ အဲဒီလိုမျိုးတွေ။ ဒါတွေက မဖြစ်သင့်ဘူး။ သံရုံးဘက်ဆိုရင်လည်း ဝန်ထမ်းက ၁၀ ဦးပဲရှိတယ်။ ကျန်တဲ့ အလုပ်တွေလည်း ရှိသေးတော့ မနိုင်ဘူး။ ဖြစ်သင့်တာက ကော်မရှင်ကနေ ဒီဟာတွေကို ကျွမ်းကျင်တဲ့သူ ၁ ဦးလောက် ဒီမှာ လာပြီး တာဝန်ချထား ပေးမယ်ဆိုရင် အဆင်ပြေနိုင်တာပေါ့။ အဲဒီလိုမဟုတ်ရင် လုပ်ရကိုင်ရတာက အဲဒီလိုအခက်အခဲတွေကတော့ အများကြီး ပါပဲ။
မေး ။ ။ ကြိုတင်မဲ လုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘာများဖြည့်စွက်ပြောချင်ပါသေးလဲ။
ဖြေ ။ ။ ကျနော်တို့ခန့်မှန်းထားတာက ကြိုတင်မဲ ၇၀၀၀ ထောင်ကျော်လောက် ရမယ်လို့ ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ သဘာဝ ကျစွာနဲ့ ပုံစံ-၁၅ တင်ထားကြပေမယ့် လာမပေးဖြစ်မယ့် သူတွေလည်းရှိနိုင်သေးတာကိုး။ ဒါပေမယ့် အားလုံးရဲ့ တက်ကြွနေ တဲ့ ဆန္ဒတွေကို ပြည့်ဝစေဖို့ အတွက်ကိုလည်း ကျနော်တို့က အဖက်ဖက်က အတတ်နိုင်ဆုံး ကူညီ ဆောင်ရွက် ပေးနေတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် မဲဆန္ဒရှင်တွေကလည်း လာပေးကြလိမ့်မယ်လို့ ကျနော်တို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
ဒီပိတ်ရက်တွေမှာ ကြိုတင်မဲလုပ်ငန်းတွေက အောင်အောင်မြင်မြင် ဖြစ်သွားမယ်လို့လည်း မျှော်လင့်ပါတယ်။ အခက်အခဲကာလကို ကျော်ဖြတ်ခဲ့ပြီလို့ သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
]]> မြိုင်မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးပြောပြသည့် အုပ်စုဖွဲ့တိုက်ခိုက်မှု ဖြစ်စဉ် https://burma.irrawaddy.com/opinion/interview/2020/10/06/231125.html Tue, 06 Oct 2020 12:11:03 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=231125
အခင်းဖြစ်ပွားတဲ့ညက ကိုယ်တိုင်သွားရောက် ဖြေရှင်းခဲ့တဲ့ မြိုင်မြို့နယ်၊ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးသန့်စင်ခိုင်ကို ဧရာဝတီ အကြီးတန်း သတင်းထောက် ထွန်းထွန်း က ဆက်သွယ်ခဲ့ပြီး ဖြစ်စဉ်အခြေအနေတွေ၊ မျက်မြင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ အခြေအနေတွေကို မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။
The post မြိုင်မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးပြောပြသည့် အုပ်စုဖွဲ့တိုက်ခိုက်မှု ဖြစ်စဉ် appeared first on ဧရာဝတီ.
]]> မြိုင်မြို့နယ် NLD စည်းရုံးရေးမှူးအိမ် အုပ်စုဖွဲ့တိုက်ခိုက်ခံရမှု ၁၉ ဦး ဖမ်းဆီးထား https://burma.irrawaddy.com/news/2020/10/05/231073.html Mon, 05 Oct 2020 13:03:00 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=231073
ဦးမြင့်နိုင်၏ နေအိမ်အား လူအုပ်စုဖြင့် ဖျက်ဆီးတိုက်မှုနှင့် ဆက်စပ်ပြီး ပါဝင်သူများထဲက ၁၉ ဦးအား ဖမ်း ဆီးမိထားပြီးဖြစ်ကြောင်း မြိုင်မြို့နယ် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးသန့်ဇင်ခိုင်က ပြောသည်။
The post မြိုင်မြို့နယ် NLD စည်းရုံးရေးမှူးအိမ် အုပ်စုဖွဲ့တိုက်ခိုက်ခံရမှု ၁၉ ဦး ဖမ်းဆီးထား appeared first on ဧရာဝတီ.
]]> ကိုဗစ် အကျပ်အတည်းကြား မဲပေးရမည့် စည်းကမ်းများ UEC ကြေညာ https://burma.irrawaddy.com/news/2020/10/02/230939.html Fri, 02 Oct 2020 11:26:21 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=230939
ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ(USDP)နှင့် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်(NLD) ပါတီ တို့ အပါအဝင် ပါတီအချို့၏ ထောက်ခံ စည်းရုံးပွဲများတွင် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်များနှင့် မကိုက်ညီဘဲ လူစုလူ ဝေးဖြင့် ပြုလုပ်မှုများ ဖြစ်ပေါ်
The post ကိုဗစ် အကျပ်အတည်းကြား မဲပေးရမည့် စည်းကမ်းများ UEC ကြေညာ appeared first on ဧရာဝတီ.